Miahy ny tontolo iainana ve ianao?
EN877 Pipe vy vy
EN877 Fitaovana vy vy
Couplings vita amin'ny vy sy kofehy vy
ASTM A888 Hubless Cast Iron Pipe
EN545 598 Ductile Pipe & Flanged Fittings
Manarona fonosana sy kofehy, Gully
Stainless vy Casting faritra
Raha ny tontolo iainana no resahina dia ny fantsom-by vy no safidy tsara indrindra.
Ductile Iron Pipe dia amboarina hatramin'ny 95 isan-jato vy vita amin'ny vy voaverina. Mora simbaina ny tenany satria tsy vita amin'ny fitaovana misy poizina. Noho ny fizotry ny famokarana ary koa ny famokarana akora fototra, ny fantsom-by vy dia manana dian-karbaona kely kokoa noho ny fitaovana hafa.
Noho ireo toetra ireo, ny fantsom-by vy no hany fantsom-pamatrarana misy fanamarinana SMaRT avy amin'ny Institute for Market Transformation to Sustainability's (MTS).
Ny MTS dia nanolotra fantsom-by vy famaohana ny mari-pahaizana volamena. Midika izany fa ny fampiasana fantsom-by vy dia afaka mandray anjara amin'ny naotin'ny tetikasanao amin'ny fahazoana ny leadership amin'ny energie et en la environmental design (LEED) na ny ENVISIONcertification.
Raha te hahalala ny fomba hanampian'ny pipefrom vy ductile anao hanatratra ny tanjonao momba ny tontolo iainana sy ny faharetanao dia mifandraisa amin'ny iray amin'ireo matihanina manana fanekena ENVISION anay.
Fitaovana vy famaohana
Fampidirana rojo vy sy fantsom-by ao amin'ny ...
Fehin-kibo, Coupli fanerena avo ...
Coupling tsy misy Hub